OPTIMARA VIOLET: JACAYLKAYGA, WANAAGSAN, XUJO, IYO SIDOO KALE OPTIMARA MAY DREAM IYO MICHIGAN - SAWIRADA GEEDKA IYO SHARAXAADDA NOOCYADA - SOOSAARKA DALAGGA
Violet "Optimara" ayaa muddo dheer ka qaadatay dhirta ubaxa. Ubaxeeda waxay ku qurxoon tahay quruxdeeda, caleemuhuna waxay soo jiitaa dareenka.
Warshadani waxay leedahay midabtakoor. Optimar ma aha warshad dilka ah, laakiin muddo gaaban oo noloshiisa ah waxay uqalmaysaa isha leh ubaxyo qurxoon.
in our article waxaan ka hadli doonaa noocyada ugu fiican ee violatima violets. ku saabsan asalka iyo astaamaha. Waxa kale oo aad daawan kartaa fiidiyaha waxtar leh mawduucan.
Tilmaanta guud ee geedka
Violet "Optimara" - tani ma aha nooca geedka, laakiin magaca shirkada ku hawlan beerista Saintpaulia (magaca labaad waa cillado). Noocyada ay shirkadu soo saarto waxay badanaa leedahay horgal Optimara ee cinwaanka. Violets "Optimara" waa wakiillada firfircoon ee dhirta kulaylaha.
Xaydha ugu yar ayaa waxyeeleyn karta waxayna keeni kartaa in la joojiyo ubax. Xubnuhu waxay u baahan yihiin diirimaad, keliya xaaladdan geedka ayaa bararaysa.
Guddi: Bakhaaro badan oo isku dayaya in ay sii dheereeyaan nolosha cayayaanka ayaa isticmaalaya khiyaamo yar: waxay ku wareegaan wareegyada polystyrene ee dheriga. Taasi waxay bixisaa kuleylka lagama maarmaanka u ah Saintpaulia. Weli waxaa suurtagal ah in la isticmaalo dheryihii oo dheriga la geliyo, sidaas awgeed waa la xakameynayaa qabowga.
Noocyada noocaan ah ee violets ma aha mid caqli gal ah, taas oo saameeya qaybinta. Xadgudubyada Afrika kuma habboon yihiin taranka iyo qaybinta.. Laakiin waxay ku xiran tahay xannaanada waxay ku siin karaan gooyn aad u fiican, oo ay sii dheereynayaan noloshooda. Rabshadaha "Optimar" ee dheryaha yaryar waxaa la iibiyaa waxaana loo isticmaalaa bouquet marmar, maadama uu kuusku muuqdo hal mar.
Ka dib markii uu geedka burburay, waa la jaraa. Ka mid ah noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ee Opatima noocyada aad ka heli kartaa muuqaal ah muuqaalka.
Dhammaan Saintpaulias waxay leeyihiin koritaan degdeg ah oo laga soo jarayo si ay u muuqato sida rosette ubax. Ubax walax isku mar. Tirada ubaxa ee xilliga ubaxku waa mid aad u ballaaran. Qeybaha gundhiga ahi waa yar yihiin.
Violets waxaa loogu talagalay beerista warshadaha iyo sidaas darteed aad u la qaadi karo oo aan qabyo ahayn. Ubaxyada dhirta waxay leeyihiin siyaalo kala duwan, laakiin dhammaantood waxay leeyihiin midab taajir ah. Ubaxyada violalmar violets waa symmetrical.
Saintpaulias waxay leeyihiin nidaam xidid aan haboonayn. Maqsinnada caansaankani waa mid cufan leh caleemaha asalka ah. Caleenku waxay leedahay noocyo kala duwan, iyadoo ku xiran noocyada kala duwan, waxay noqon kartaa wareegsan, ovoid, qallafsan oo leh saldhig qalafsan ama aasaas leh.
Calaamad fiiqan ama wareegsan ayaa lagu ogaan karaa dhammaadka caleen. Dhinacyada geesaha waxaa jiri kara ilko yaryar ama kuwo waaweyn, waxaa sidoo kale jira geeso yar oo aan helin gargaar la'aan, wax yar ka kooban.
Caleenta caleenta "Optimara" waa mid gaaban, wax yar oo qallafsan, si xoogan loo xaaqay, ama u eg qaabka qaadada, ama qaadada dhabarka ah. Ku dhawaad ​​had iyo jeer caleemaha Saintpaulia ayaa lagu rifay midabo kala duwan oo cagaaran, laakiin waxaa jira wax ka reeban, noocyada qaar ka mid ah violets ah caleen ayaa laga yaabaa in ay leeyihiin meelaha lagu rinjiyeeyey kareemka, saytuunka, salad, jaalle ama casaan.
Meelo badan oo midabo leh ayaa laga dhigi karaa saldhigga, iyada oo geesaha caleenta caleen ah, ama samee qaabab kala duwan oo ah muraayadda. Goobta badaha ee caleenta caleemaha ah waa caadi ahaan lacag-cagaaran., inkasta oo noocyo ama noocyada caleemaha ee midabkiisa ay badanaa leeyihiin siyaalo kala duwan oo casaan ah.
Dusha sare ee caleemuhu waxay noqon karaan kuwo dhalaalaya ama matag, taas oo ah heerar kala duwan oo lagu daboolay timo. Xaashidu waxay lahaan kartaa xayndaab ama "xargaha" ah.
Goorma iyo sidee bey ubaxa u muuqday?
Sanadkii 1930, violet ugu horeeyay ayaa lagu koray ee lagu koriyo shirkadaha. Marka lagu daro Saintpaulia, shirkaddu waxay ku hawlan tahay taranta dhirta kale. Nooc kastaa wuxuu ku qaatay goobaha lagu koriyo, maadada Afrika ayaa loo qoondeeyay, tusaale, kaliya 1 mitir oo laba jibbaaran. Laakiin markii mulkiilaha shirkadda Hermann Holtkamp uu go'aansaday inuu bedelo qaabka shirkadda oo uu la macaamilo oo keliya kaliya Saintpaulias. Kadibna hawsha firfircoon ee abuuritaanka noocyo cusub ayaa bilaabmay iyo qarnigii badhtamihii labaatanaad guul weyn ayaa yimid shirkadda.
Qaybta ganacsiga ugu horreeya ee ganacsiga Holtkamp (1952) wuxuu ahaa Sankt Martin. Sidaa daraadeed, waxay bilaabeen kor u kordhay violet, shirkaddu waxay bilaabeen inay soo saaraan noocyo badan oo cusub oo Saintpaulia ah, oo si tartiib tartiib tartiib ah ku dhajiyay dhammaanba dhirta jira ee laga koriyo.
Sanadkii 1961, shirkadda waxay magaceeda ka beddeshay Dorrenbach-Holtkamp oo kuyaala beeraha Hermann Holtkamp. Sanadkii 1977-dii, waxaa lagu furay Nashville, Tennessee for saintpaulia, isla markaana isla waqtigaas Optimara Patent-ka Patent.
Warbixinta noocyada shakhsiga ah iyo sawiradooda
Waxaa jira noocyo kala duwan oo warshad ah oo ka mid ah qalabka Opatima. Dhammaan Saintpaulias ka mid ah kuwa ku matala wax soo saarka ayaa si weyn uga duwan midba midka kale midabka, qaabka iyo cabbirka.
Rabshaduhu waxay jecelyihiin jacaylka.
Optimara weligeed qaali ah.
"Optimara May Dream May."
"Optimara Michigan" waa xulashada Ingiriiska.
Digniin: Miro yar oo ay sameeyeen caleemo yaryar. Waraaqaha ayaa la dhigaa midba midka kale oo leh foorno, sidaas awgeedna waxaa la sameeyaa mid aad u xaddidan isla markaana aan meel fog ka helin.
Caleemaha jilicsan ee ubaxyo waaweyn oo midabyo kala duwan ah. Inta badan waxaa lagu qurxiyaa meel leh midab kala duwan. Dareeshada jaalaha ah waxay ku darsataa ubaxaan. Peduncles aad ayuu u xoog badan yahay, mid kastaana wuxuu sameeyaa 5-6 burooyinkeeda.
Waxay leedahay caleemo cagaaran oo fudud. Ubaxyo jilicsan ayaa leh midab cad. Waxay ku qurxiyaan lafo madow-guduud ah. Tilmaamidu waa in xilliga diiran ee ubaxa uu noqdo mid gebi ahaanba madow-guduud ah, oo kaliya talooyinka tufaaxu waa caddaan.
Iyo wakhtiga qaboobaha casirku wuxuu soo bandhigaa ubaxyo ficil ah.. Iyo bartamaha ubaxa ayaa weli ah peephole yar oo buluug ah oo leh stamens huruud ah.
Waxaan kugula talineynaa in aad daawato fiidiyowga ku saabsan qaladka Optimar ee "Jacaylkayga" kala duwan:
Waxay leedahay laba ubaxyo cad oo leh xarun casaan leh. Caleenta wuxuu leeyahay midab cagaaran oo dhexdhexaad ah. Wuxuu ka tagaa wax yar oo ilko ah, oo u eg qaab wadnaha ah.
Waxaa lagu dhajiyay ubax cad oo leh xudduud casaan-guduud ah oo ku yaalla saddexda xayawaanka hoose iyo buluug ee labada sare ee la isku daro xudduudda cagaaran. Ubaxuhu waxay ku xad gudbaan fudud yar-yar oo qafiif ah. Caleenta cagaaran waa mid cagaaran, dhalaalaya, lakulma, yar yar.
Kala duwanaanta taxanaha taxanaha ah. Waxay leedahay hanti aad u weyn oo fudud oo la mid ah xiddigaha. Xaruntuna waa lafdhago buluug ah oo buluug ah. Ubaxa wuxuu ku koraa ilaa 7 cm, qaabka koobaad waxaa loo hayaa muddo dheer, kadibna shaaca laga qaaday.
Ubaxyada 2-4 ayaa ku jira barar yaryar oo gaaban. Ubaxa oo hodan ah, wuxuu soconayaa waqti dheer. Caleenta cagaarka ah ayaa leh midab cagaaran-cagaaran. Qaybta dambe ee warqadda waxaa lagu rinjiyey casaan.
Qurxinta quruxda badan ee caleenta cagaaran waxay abuuri kartaa qalab fiican oo dabaq ah.. Tani waxay u oggolaaneysaa midabada midabka cad in ay asalka u tahay si aad u eegto.
Waxaan ku talineynaa inaan daawano fiidiyowga ku saabsan noocyada kala duwan ee 'Optimar' ee myDream:
Waxaa lagu dhajiyay ubaxyo midab casaan leh oo jilicsan. Bloomkeedu waa hodan yahay, wuxuu u eg yahay koofiyad. Caleemaha waa cagaar qurux badan. Dhinaca kaluunka, waxay leeyihiin madow casaan. Heerka socket, iswada.
Waxaan kugu martiqaadaynaa in aad barato noocyo kale oo qurux badan oo qurux badan: "Fairy" iyo noocyo kale oo ay ka heleen dhirta Dadoyan, oo ah "Cherry", oo ah qaali ah "Isadora" iyo "Copper Horseman", "Pansies", oo la mid ah foornooyinka dooxada. Saamaynta aqalka dhirta aqalka, nalalka Chanson iyo daboolka buluuga ah.
Violet "Optimara" dhab ahaantii waa geedka quruxda badan. Ma jecla nooc kasta oo violets ah. Muuqaal aad u kala duwan ayaa ah noocyada kala duwan ee qurxinta iyo midabada. Haddii aad raacdo dhammaan xeerarka daryeelka, Saintpaulia waxay istaagi doontaa waqti dheer, oo ay ku faraxsan yihiin dhammaan qoysaska leh ubax jilicsan.